Nelson Chamisa insisted “change is coming”, as President Emmerson Mnangagwa prepared for his inauguration.
The Movement for Democratic Change is alleging irregularities and calling for a fresh vote or for Nelson Chamisa to be declared the winner.
Tendai Biti is a leading member of the opposition Movement for Democratic Change party.
Nelson Chamisa declared a ‘day of mourning for democracy’ and claimed the vote was rigged.
Zimbabwe police break up opposition event amid election turmoil
The electoral commission declared Emmerson Mnangagwa was the winner of this week’s poll.
Harare calm as Zimbabwe opposition claims their election agents were denied access to verify ‘fake' election results
President Emmerson Mnangagwa urged Zimbabweans to stay peaceful after being declared the winner of a tight election.
Zimbabwe leaders urges opposition to ‘lose graciously’ as frustrated voters say Zanu-PF 'have to go'
Zimbabwean leader contacts opposition in bid to ease tensions after election violence
Police said they requested the military’s help because they were unable to cope.
The explosion in Bulawayo on Saturday has been called an assassination attempt on the president.
Robert Mugabe’s main rival have called on Zimbabwe’s president to step down - as the country remains in political limbo.
Zimbabwe's vice president Emmerson Mnangagwa has been fired in a major government shake-up, the country's information minister has said.
Mugabe: I have mandate to take over white-owned assets
Zimbabwe president Robert Mugabe claims his party won “a resounding mandate” from voters to complete a sweeping black empowerment programme to take over foreign and white-owned assets.
Mugabe leaves for UN amid chaos at home
President Robert Mugabe headed for the UN General Assembly today, leaving Zimbabwe in limbo over a new power-sharing agreement with his political rivals.
Zimbabwe's power-sharing deal signed
Zimbabwe’s president Robert Mugabe and opposition leaders today signed a power-sharing deal that will see him lose some of his all-encompassing pow
Zimbabwe power-sharing deal to be signed
On paper – and it’s a paper he has yet to sign or even publicly admit exists - Zimbabwean President Robert Mugabe appears to be acknowledging at last that he cannot rule the African country alone.
Mugabe monopoly on the line in power-sharing deal
Zimbabwe today looked to be on the brink of an historic power-sharing deal that could finally end Robert Mugabe’s 28-year monopoly on power in the country.
Mugabe 'should hold new election'
The main opposition leader in Zimbabwe has said that if Robert Mugabe cannot agree at the negotiating table to surrender most of his powers, he should put the decision to his people in a new election, the main opposition leader said.
Mugabe to convene Zimbabwe parliament
Zimbabwe president Robert Mugabe intends to open parliament next week for the first time since MPs were elected four months ago, threatening to undermine power-sharing talks.
Mugabe 'agrees to power-sharing talks'
Zimbabwe president Robert Mugabe and his fiercest rival opposition leader Morgan Tsvangirai are expected to sign an agreement to hold power-sharing talks today.
Zimbabwe: Opposition claims 113 supporters have been killed
Zimbabwe’s opposition party reported today that at least 113 of its members have been killed in political violence since the country held its first round of presidential voting in March.
Zimbabwe opposition sets conditions for more talks
Zimbabwean government and opposition officials met in South Africa in a bid to find a way out of their country’s troubles following the recent presidential election run-off.
Talks between Zimbabwean factions 'have resumed'
Zimbabwe’s ruling party and the opposition resumed talks today aimed at resolving the country’s violent political crisis, an official said.
Mugabe 'ready to form unity govt'
Zimbabwe’s foreign minister says President Robert Mugabe is ready to form a unity government with opposition party members.
Opposition denies Mugabe party talks
Zimbabwe’s opposition party today denied state media reports that it will hold talks with Robert Mugabe’s ruling party.
Mugabe back in Zimbabwe
Robert Mugabe has arrived back in Zimbabwe having attended the African Union Summit in Egypt.
Zimbabwe: 200 seek refuge at US embassy
About 200 opposition supporters have sought refuge at the US embassy in Zimbabwe, the US ambassador said today.
Tsvangirai demands new mediator for unity talks
Zimbabwe’s political leaders clashed today over whether to talk about how to resolve the country’s crisis as the US called for UN sanctions against President Robert Mugabe and his officials.
US calls for Mugabe sanctions
The US has called for sanctions against Robert Mugabe's regime in Zimbabwe and demanded that his government immediately begin talks with the opposition to peacefully resolve the country's political crisis.
EU makes Tsvangirai call
European Union officials today called for Zimbabwe’s opposition leader Morgan Tsvangirai to be named head of government in any unity government with President Robert Mugabe.
Zimbabwe’s Robert Mugabe shrugged off calls for his resignation today as his chief spokesman told Western critics to “go hang”.
Mugabe's aide shrugs off poll criticism
A spokesman for Zimbabwe’s Robert Mugabe today dismissed Western criticism of its widely disputed elections.
The Netherlands’ Foreign Ministry said Zimbabwe’s opposition leader has left the Dutch Embassy in Harare, Zimbabwe.
Mugabe seeks credibility at African summit
Zimbabwe’s Robert Mugabe joined an African summit today looking for some political legitimacy after his presidential re-election was condemned around the world.
Mugabe under pressure to agree power-sharing deal
Robert Mugabe will face pressure from African leaders to agree a power-sharing deal in Zimbabwe today, after claiming victory in an internationally-condemned unopposed election.
Mugabe to be inaugurated
Robert Mugabe is to be inaugurated as president of Zimbabwe today.
South Africa sends refugees back to Zimbabwe
The aid group Medecins Sans Frontieres said South Africa has deported about 450 Zimbabweans from a detention centre on the border.
Brown: 'Mugabe must be rejected by the world'
Robert Mugabe’s “illegitimate” regime must be rejected by the world, UK Prime Minister Gordon Brown urged today as votes were counted in Zimbabwe’s “sham” election.
Zimbabwe community calling for action
Zimbabwean people living in Ireland are calling for less talk and more action from the international community.
Voters intimidated in Zimbabwe election
Roaming bands of government supporters heckled, harassed and threatened people into voting in a run-off election in which Zimbabwe President Robert Mugabe was the only candidate, ensuring he will remain in power despite international condemnation of the balloting as a sham.
G8 leaders refusing to accept result of Zimbabwe election
Foreign ministers from the world's wealthiest nations said today they would not recognise the outcome of the run-off presidential election in Zimbabwe.
Diplomat to check on Irish in Zimbabwe
Ireland is sending a top diplomat to Zimbabwe to check the welfare of Irish citizens as voters go to the polls in tomorrow’s re-election of president Robert Mugabe.
Mandela condemns Zimbabwe's 'tragic failure of leadership'
Robert Mugabe was more isolated than ever today after Nelson Mandela condemned the “tragic failure of leadership” in Zimbabwe.
Tsvangirai leaves safety of embassy
Zimbabwe’s opposition leader Morgan Tsvangirai today left his refuge in the Dutch Embassy after fleeing there over the weekend.
Africa tries to find solution to Zimbabwe impasse
African leaders met today in hope of finding a solution to Zimbabwe, but without one of their most influential members.
Zimbabwe: UN 'duped' into condemnation of violence
Zimbabwe’s UN ambassador says a US and British-led conspiracy fooled the UN Security Council into concluding the violence gripping his nation has made it impossible to hold a fair presidential election.
Tsvangirai 'forced to seek refuge from Mugabe's troops'
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai was fleeing troops when he took refuge in the Dutch Embassy in Harare, it emerged today.
UN condemns Zimbabwe violence
Outraged at the turmoil in Zimbabwe, the UN Security Council declared this morning that a fair presidential vote is impossible because of the “campaign of violence” waged by President Robert Mugabe’s government.
UN chief hits out at Zimbabwe government
UN Secretary General Ban Ki-moon has accused Zimbabwe’s government of preventing free and fair elections and called for an end to “the campaign of violence and intimidation”.